Archive du 20180503
Depiote ho an’ny fanovana Mitohy sy miha mafy ny tolona
Mikatso tanteraka aloha ny raharaham-pirenena amin’izao fotoana izao. Mitombo hery hatrany ny herim-panoherana, ka mahavita mampikatso ny fampiodinan-draharaham-panjakana samihafa amin’ny alalan’ny fakana ny mpiasan’ny Minisitera isan-karazany ny depioten’ny fanovana. Omaly dia nihazo ny Minisitera maromaro teny Anosy izy ireo sy ny vahoaka mpitolona.
Antoko Marina “Tsy azo vahana ivelambelany intsony ny aretim-pirenena”
Herintaona sy tapany mialoha no efa tsinjonay izao zava-mitranga ankehitriny izao, hoy ny mpandrindra nasionalin’ny antoko politika Marina, Désiré Ranaivoson, raha naneho ny heviny manoloana ny zava-misy ankehitriny.
Krizy politika Mampitandrina ny foloalindahy
Manoloana ny toe-draharaham-pirenena, dia nanao fanambarana teny Betongolo, omaly, ny lehiben’ny mpitandro ny filaminana notarihin’ny minisitry ny fiarovam-pirenena Jeneraly Rasolofonirina Béni Xavier,
Masoivohon’i Afrika Atsimo “Raharahan`ny samy Malagasy io”
Manohana ny ezaka rehetra atao mitondra mankany amin’ny filaminana sy fandriampahalemana i Afrika Atsimo.
Vahoakan’ny Faritanin’i Toliara Mitaky ny fametraham-pialan’ny filoham-pirenena
Ny vahoaka any amin’ny Faritanin’i Toliara dia ny any Atsimo Andrefana, Menabe, Androy, Anosy dia efa samy namoaka ny ambatombolamenany hoe :
Miha mahazo hery hatrany ny hetsi-panoherana satria vitan’ireo avy amin’ny depioten’ny fanovana ny mampikatso ny minisitera sy sampandraharaha isan-karazany eto amin’ny firenena. Voatariny ny ampahany betsaka amin’ny mpiasam-panjakana. Ireo ain’ny firenena, toy ny ladoany aza efa manomboka mikatso.
Antoko politika AKATA “Tsy azo ekena intsony ny fitondrana tetezamita”
Nivoaka tamin’ny fahanginany ihany koa ny antoko politika AKATA Zana-drazana omaly manoloana ny toe-draharaham-pirenena misy ankehitriny.
Fikambanan’ny zanak’i Mahajanga Nankasitraka ny FFKM sy ny FFM
Na dia tsy manao politika aza ny FIkambanan’ny ZAnaky ny faritanin’i MAhajanga MItambatra (FIZAMAMI) dia tsy afaka ny hangina amin’ny maha olom-pirenena azy, hoy ny filohan’ny fikambanana, Bary Emmanuel Rafatrolaza, omaly tetsy amin’ny Live hotel Andavamamba.
Antoko Harena Nantenaina handamina ny filoha, kinanjo…
Samy manana ny fijeriny ny raharaham-pirenena tokoa ny rehetra. Ho an`ny Antoko Harena izao, araka ny nambaran`i Lezava Fleury, filoha nasionaliny dia mazava ny resaka fa tsy maintsy amin`ny alalan`ny fifanakalozan-kevitra sy fifanatonan`ireo hery lehibe no hamahana ny olana eto amintsika.
SECES Antananarivo Miantso ny rehetra hamongotra ny jadona
Nanamafy ny fitakiany ny fialan’ny filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina, tetsy amin’ny oniversiten’Antananarivo Ankatso omaly ry zareo avy eo anivon’ny sendikan’ny mpampianatra mpikaroka na ny SECES, sampana Antananarivo.
Baolina kitra Analamanga Tompondaka indray ny Elgeco Plus
Nahazoana vokatra :ny andro faha-15 amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ligin’Analamanga eo amin’ny taranja baolina kitra notontosaina omaly alarobia 02
Basikety Tompondaka nasionaly N1 B 2018 Hotontosaina anio alakamisy 03 mey ireo 1/8-ndalana
Hotontosaina anio alakamisy 03 mey 2018 etsy amin’ny kianja ivelany sy ao amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina ireo lalao 1/8-ndalan’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara amin’ny taranja Basikety baolina 2018 sokajy N1 B.
Rugby à XV hetsika 1 mey XV Centre sy ny Scb ary ny Cnaps rugby no nandroaka ny omby 3
Lalao famaranana 3 nokarakarain’ny FTMR tarihan’i Nainabe na Rakotondrafara Jean Heriniaina ka niadiana omby avy no notanterahina teny amin’ny kianja Makis Andohatapenaka tamin’ny talata 01 mey 2018.
Famaranana ny Champions League UEFA 2018 Liverpool sy Real Madrid no hifanandrina
Resin’ny As Roma Italianina 4-2 ny ekipan’ny Liverpool Fc Anglisy tamin’ny manasa-dalana miverina notontosaina tany Italie omaly alarobia 02 mey alina.
Iza ihany no handresy ?
Andrasana indray aloha izay hiseho anio, taorian’ny fanambaran’ny lehiben’ny mpitandro ny filaminana omaly manoloana ny raharaham-pirenena, izay tena mangotraka amin’izao fotoana.
Fanafoanana ny lefakozatra Handalo fanadinana indray i Madagasikara
Omaly no natomboka tetsy amin’ny hotely Ibis Ankorondrano ny atrikasa hijerena sy hanamarinana ny zavatra vitan’i Madagasikara momba ny ady amin’ny fanafoanana ny lefakozatra.
Tontolon`ny asa eto Madagasikara Mbola tsy voahaja ny zon’ny mpiasa
Ny voalohany volana mey dia ny fetin'ny Asa ,izay no mahazatra amin’ny fitenenan'ny olona raha vao miresaka io daty io.
Fiofanana ara-pandraharahana “Sahia manova” Mizara ny traikefany i Erick Rajaonary
Tontosa tamina toerana miisa 7 teto Madagasikara, dia i Fianarantsoa, Toliara, Antsiranana, Toamasina, Mahajanga, Antsirabe ary Antananarivo nanomboka ny 23 aprily ary nifarana ny 28 aprily teo ny fanofanana momba ny asa fandraharahana nosalorana ny anarana hoe « Sahia Manova ».
Groupe Vidy Varotra Feno herintaona ny Top Radio 102.8 Fm
Feno herintaona katroka omaly 2 mey ny onjam-peo Top Radio ao amin’ny maridrefy 102.8 Fm, izay ao anatin’ny vondron’orinasa Vidy Varotra.
Vokatry ny tsy fandriampahalemana Hihazakazahana ny fanamboarana « grille de protection »
Mirongatra sy mahazo vahana hatrany ny tsy fandriampahalemana eto amintsika. Vao tamin’ny talata, ohatra, dia toerana fakana sy fanaterana vola iray teny Ankadindramamy no notafihina jiolahy tsy misaron-tava roa mitondra môtô ka lasany tamin’izany ny vola 3 tapitrisa Ar.
Mibaribary tsy takona afenina intsony ny lainga nataon’ny Praiminisitra izay nilaza tamin’ny haino aman-jery fa tsy nisy vola very izany tao aminy. Ny zandary omaly dia nanao fampitam-baovao ary nanamarina fa nisy tokoa io fahaverezam-bola tao an-tranony tetsy Ivato io. Vola mitentina 800 tapitrisa ariary izany ary volam-panjakana izay azony ampiasainy manokana (fonds spéciaux) raha araka io fampitam-baovao io ihany. Nisy ny very saingy maninona no mandainga ?
Fidangan’ny vidim-piainana Hanao diabe hanairana ny mpitondra ihany koa ny MCI
Sahirana ny ankamaroan’ny tokantrano Malagasy. Ankoatra ny tsy fisian’ny fandriampahalemana dia miakatra isan’andro ny vidim-piainana. Vao tsy ela akory izay no niakatra indray ny vidin’ny siramamy sy ny menaka raha efa saika iainana isan’andro ny fiakaran’ny vidin’ny kojakoja madinika toy ny savony …